Porofo manamarina ny fifandraisana misy eo amin'ny laharana SERP sy ny mpampiantrano tranonkala | Martech Zone
Porofo manamarina ny fifandraisana misy eo amin'ny laharana SERP sy ny mpampiantrano Internet
Zoma, Oktobra 4, 2013 Larry Alton
Tamin'ny faran'ny volana Aogositra dia nanazava i Matt Cutts fa mijery ny hafainganan'ny tranokala i Google ho antony iray isehoan'ny tranonkala iray eo amin'ny pejy valin'ny karoka. Ao amin'ny Lahatsary fanampiana Webmaster, hoy izy: “Raha tena miadana tokoa ny tranonkalanao dia nilaza izahay fa mampiasa ny hafainganan'ny pejy amin'ny filaharanay. Ary noho izany ny zavatra rehetra dia mitovy, eny, ny tranokala iray dia afaka mihena ambany.
“Ankehitriny, mirona tsy miresaka zavatra amin'ny lafiny sahala amin'ny segondra tanteraka isika satria samy hafa ny fomba fiasan'ny tranonkala amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao, ary misy fantsom-pifandraisana hafainganam-pandeha sy hafainganam-pandeha amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
“Na izany aza, fomba tsara hieritreretana azy io raha hiteny hoe okay, jereo ny manodidina ireo tranokalano. Jereo ireo tranonkala naverina miaraka aminao, ary avy eo raha ianao no be lavitra. Raha eo amin'ny farany ambany ianao satria tena miadana tokoa ny tranonkalanao, eny, eny, mety ho ambany noho ny haingan'ny pejy ny tranokalanao. ”
Ny fifandraisan'ny fotoana fampidinana
Ny fotoana fandefasana entana lava dia zavatra izay niadian-kevitra foana ny manam-pahaizana momba ny fampiasa, satria maro kokoa ny tompona tranokala no nameno ny pejin-tranony tamin'ny script, sary ary atiny hafa izay nahatonga ny mpitsidika hipetraka sy hiandry ny entana.
Ny tanjona dia ny hiantohana ny traikefan'ny mpampiasa tsaratsara kokoa, saingy tsy tratry ny fitambaran'ireo mpamorona tranonkala sy tompona tranonkala izany. Betsaka no nahatsapa fa ny safidy hanolotra singa "cool" fanampiny dia zava-dehibe kokoa noho ny fisorohana ny fahasosoran'ny mpampiasa.
Manohana ny mpanjifa ny adihevitra
Na eo aza ny fampiasan'ny Google ny fotoana ilana tranokala fampidirana ao amin'ny tranokalan'ny mpitsidika dia singa iray manan-danja amin'ny laharan'ny tranokala, maro ny olona no tsy isalasalana fa hihevitra ny fotoana fandefasana haingana kokoa ho zava-dehibe. Ary ny fotoana fampidinana pejy haingana kokoa dia matetika manomboka amin'ny mpamatsy izay mampiantrano ilay tranonkala.
Ny ankamaroan'ny mpamatsy fampiantranoana dia mizara mpizara amin'ny mpanjifany maro. Arakaraka ny habetsaky ny tranonkala atolotra amin'ny mpizara manokana, arakaraka ny habetsaky ny loharanom-pahalalana no ampiasaina ary mijaly ny ora fandefasana.
Raha maro ireo mpamatsy fampiantranoana no hamindra ny tranokalan'ny mpanjifa amin'ny mpizara hafa raha angatahan'ny mpanjifa izany, safidy hafa toy ny fampiantranoana natokana na mpizara manokana virtoaly dia hanampy amin'ny fampihenana ny fotoana fandefasana pejy. Ny olana dia tsy ny mpamatsy fampiantranoana rehetra no manana ireo safidy ireo; ary matetika, tsy manana izany ny drafitra fampiantranoana misy fihenam-bidy na maimaim-poana.
Mihoatra ny ora fandefasana fotsiny
Ny fotoana fandefasana pejy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny laharan'ny tranonkala. Na izany aza, tsy io ihany no miovaova mety ho voan'ny host web. Ny fiarovana, ny fotoana / fialantsasatra ary ny toerana dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny fomba fanombanan'ny motera fikarohana ny pejin-tranonkala.
Tsy misy olona maniry ny fanesorana ny tranokalany amin'ny Google, na ny motera fikarohana hafa, satria mampiantrano malware izany. Saingy ny tatitra iray avy amin'ny WhiteHat Security dia mampiseho fa ny 86 isan-jaton'ny tranokala rehetra dia manana fahalemena farafaharatsiny farafaharatsiny izay ahafahan'ny mpijirika mampiditra kaody ratsy ao amin'io tranonkala io.
Ny roa amin'ireo fahalemena iraisana dia mifandray mivantana amin'ny mpampiantrano: FTP marefo ary marefo ny fikirakirana mpizara.
Raha tsy mahazo miditra amin'ny tranokala ny mpitsidika satria maty ny mpizara, dia tsy afaka manatona azy koa ny hala amin'ny motera fikarohana. Ireo mpampiantrano tranonkala izay tsy mahazaka antoka 99.9 isan-jato dia tsy tokony hodinihina noho ny fiatraikany ratsy mety hateraky ny ezaka SEO an'ny tranonkala.
Ireo orinasa izay monina any Etazonia dia hanana toerana ambony kokoa amin'ny fikarohana ataon'ny olona iray any Etazonia - raha toa ka any Etazonia no hampiantranoana io tranonkala io. Toy izany koa, ny orinasa any amin'ny firenen-kafa na faritra jeografika dia tokony hisafidy drafitra fampiantranoana izay akaiky azy, satria ny fikarohana aterak'izany faritra izany dia hanome toerana ambony kokoa sy misy ifandraisany kokoa ny tranonkala eo an-toerana.
Mazava ho azy, ny fisafidianana mpampiantrano mety dia tsy misy dikany amin'ny SEO raha tsy jerena ny atiny sy ny laharana hafa; fa ho an'ny orinasa iray izay mandray ny lafiny rehetra amin'ny valin'ny motera fikarohana azy ireo dia azon'ilay mpampiantrano atao ny manome azy ireo ny sisiny ilainy.
Larry Alton Friday, October 4, 2013
Larry dia consultant tsy miankina amin'ny orinasa manokana amin'ny fironana media sosialy, orinasa ary fandraharahana. Araho izy ao amin'ny Twitter sy LinkedIn.
Fironana sy fanamby ary fahombiazana amin'ny automatisation marketing
Slides: Design Interaction, User Interface Design, User Experience Design
Oct 4, 2013 amin'ny 10: 24 AM
Lahatsoratra tena mahaliana, tena hodinihiko ity miaraka amin'ny famolavolana ny tranonkalako!